Blockchain News 29 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 29, 2018 Admin
Blockchain News 29 Janoary 2018
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra Japana fivarotana elektronika Yamada Denki izao manaiky Bitcoin
Yamada Denki, iray amin'ireo lehibe indrindra Japana fivarotana elektronika, dia nanambara izy ireo aza mandray Bitcoin toy ny fandoavam-bola fomba fiasa.
Izy ireo ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Bitflyer, ary ho fahatsiarovana ny fampandrosoana vaovao, Bitflyer dia manome ny fanomezam-pahasoavan ' 500 Yen ho voalohany 500 mpanjifa mandoa amin'ny virtoaly forex.
Korea Atsimo ny Retailer sy ny e-varotra goavana WeMakePrice hanaiky 12 cryptocurrencies
Of kePrice, kokoa fantatra amin'ny anarana hoe Wemepu, iray amin'ireo lehibe indrindra Korea Atsimo e-varotra sy ny sehatra lehibe mpaninjara dia mikasa ny fanekena 12 cryptocurrencies, anisan'izany Bitcoin, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Bithumb, lehibe indrindra ao amin'ny firenena cryptocurrency fifanakalozana.
WeMakePrice dia manampy cryptocurrencies ho any amin'ny sehatra efa misy vola OneThePay. Raha vao ny fampidirana dia feno, misy mpampiasa WeMakePrice dia ho afaka hividy zavatra sy ny tolotra amin'ny fampiasana cryptocurrencies.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny Koreana Tatsimo haino aman-jery mahazatra HanKyoReh, ny mpitondra tenin'ny WeMakePrice nilaza fa ny orinasa no tonga eto ny fanapahan-kevitra ny mampiditra manontolo cryptocurrencies ho toy ny ampahany amin'ny fandraisana andraikitra lehibe kokoa mba hanamaivanana ny fanonerana ho an'ny ankapobeny dingana mpanjifa.
"…manao vola mety kokoa ho an'ny mpanjifa sy ny mpanjifa. Mandinika isika fintech fampiharana finday, hevitra, ary cryptocurrencies toy ny fomba fandoavam-bola mahomby,"Hoy ny mpitondra teny.
Ny fanambarana ofisialy orinasa voalaza: "Service bitcoin fandoavam-bola… nohatsaraina asa fanompoana sy tsy hanahirana. "
BTCC nahazo ny Hong Kong-monina blockchain fampiasam-bola tahirim-bola
Bitcoin harena ankibon'ny tany sy ny fitambaran'ny fifanakalozana BTCC dia azony iray tsy fantatra anarana Hong Kong-monina blockchain fampiasam-bola tahirim-bola. Ny harena dia hanampy ny iraisam-pirenena bola BTCC hifantoka araka ny fivoahana ny tsena Shinoa.
BTCC ny raharaham-barotra efa ripaky iray fitsipika hirika-midina any Shina, izay voarara cryptocurrency varotra ny fifanakalozana mipetraka any amin'ny firenena. Beijing ankehitriny no Bitcoin fitrandrahana amin'ny zava basy, araka ny tatitra vao haingana tao amin'ny FT sy any an-kafa.
Ny mpitondra tenin'ny hoy BTCC: “Izahay amin'izao fotoana izao dia tsy namoaka ny vaovao momba ny famatsiam-bola na ny habetsahan'ny loharanon-karena natsangana.”
Ny fifanakalozan-kevitra BTCC varotra mihoatra noho ny $25 lavitrisa danja ny vola madinika ao 2017. MOBI BTCC ny kitapom-batsy, izay nampidirina tamin'ny volana Martsa 2017, izao dia manana mpanjifa avy 180+ firenena, nanampy ny mpitondra teny.
Ao amin'ny fanambarana BTCC mpiara-manorina Bobby Lee hoe:: “Ny fahazoana ankehitriny dia tsy mampino BTCC niavaka ho an'ny rehetra izay dia mampanankery ny asa mafy nandritra ny taona vitsivitsy lasa. Tena faly aho ny momba ireo loharano manome izany BTCC hifindra mitombo haingana kokoa sy mahery vaika ny raharaham-barotra ao amin'ny 2018 ary ankoatra.”
Robotrading na boky fampianarana Trading
Robotrading no t ...
Amin'ny mpiara mandroso indrindra ...
Previous Post:Blockchain News 28 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 30 Janoary 2018